1. Inona ny fomba fanafarana?
2. Ahoana no ahafahako manara-maso ny satan'ny kaomandiko?
3. Inona avy ireo fomba azoko andoavam-bola?
4. Inona ny Floristum.ru?
5. Nahoana aho no tsy afaka mandoa amin'ny karatra?
6. Azonao antoka ve fa azo antoka ny fandoavam-bola?
7. Azoko atao ve ny mandoa vola?
8. Ahoana no fiasan'ny famerenam-bola?
9. Misy antoka ve fa ho azonao ny vola aloa?
10. Inona avy ireo fomba azo ampiasaina handoavana ny filaminana?
11. Azo atao ve ny mandefa haingana?
12. Inona ny vidin'ny fandefasana?
13. Azo atao ara-potoana ve ny fandefasana?
14. Azoko atao ve ny mametraka baiko raha tsy fantatro ny adiresin'ny mpandray?
15. Ahoana no hampahafantarana ahy momba ny fandefasana?
16. Afaka mametraka baiko handefasana any amin'ny firenena hafa ve aho?
17. Rahoviana no halefa ny didy?
Fanontaniana momba ny filaminana
18. Ahoana ny fametrahana baiko?
19. Inona no hatao raha tsy tianao ilay fehezam-boninkazo?
20. Tsy afaka mifandray amin'ireo mpivarotra voninkazo amin'ny telefaona aho. Ny hatao?
21. Raha mila mifanaraka amin'ny mpandray azy ny ora fanaterana, rahoviana izy ireo no hiantso?
22. Mila mametraka baiko mialoha ve aho?
23. Ahoana ny fomba hanaovana kaomandy orinasa?
24. Fifanarahana amin'ny fikambanana ara-dalàna
25. Ahoana no anaovana ny fisoratana anarana?
26. Inona ny loko kely indrindra azo alahatra?
Fanontaniana momba ny fehezam-boninkazo
27. Azo atao ve ny manova ny singa ao amin'ny fehezam-boninkazo na ny loko misy azy?
28. Aiza no ahitanao ny firafitry ny fehezam-boninkazo?
29. Ahoana no hahitako ny haben'ny fehezam-boninkazo?
30. Inona no hitako ao amin'ny faritra Super Offer?
31. Ahoana raha mila fehezam-boninkazo misy voninkazo ianao?
32. Ho toy ny sary amin'ilay tranokala ve ilay fehezam-boninkazo?
33. Azo atao lehibe kokoa ve ilay fehezam-boninkazo?
34. Azo atao ve ny mividy voninkazo anaty vilany na zana-ketsa?
35. Aiza no ahafahako mametraka ny faniriako amin'ilay baiko?
36. Ho vaovao ve ny voninkazo?
Fiantohana kalitaon'ny serivisy Floristum.ru
37. Milamina ve ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny tranokala?
38. Tsy afaka miahiahy momba ny fiarovana ny volako ve aho?
39. Ahoana no fomba hamerenako azy io?
40. Aiza no ahafahako manoratra ny fitarainako?
41. Ahoana no ahafahako manoratra famerenana?
42. Tena misy ve ny hevitra rehetra?
43. Afaka mandefa fehezam-boninkazo misy carte postale ve aho?
44. Afaka manafatra zavatra hafa ankoatry ny fehezam-boninkazo ve aho?
45. Karatra inona no halefa miaraka amin'ilay fehezam-boninkazo?
46. ​​Azoko atao ve ny mahita ny sarin'ny mpandray miaraka amin'ilay fehezam-boninkazo natolotra?
47. Manana rindrambaiko finday avo lenta ve ianao?
48. Nahoana no samy hafa ny safidin'ny fehezam-boninkazo amin'ny tanàna?
49. Fa maninona no avo kokoa noho ny Mosko ny vidiny?
Voalohany, asehonao ny tanàna misy ny fanaterana, safidio ny fehezam-boninkazo tianao amin'ny alàlan'ny fanindriana bokotra eo aminy ary mandehana mankany amin'ny pejy fizahana. Eto ianao dia mamaritra ny antontan-taratasin'ny mpandray, ny fotoana fandefasana ary ny angon-drakitra ny mpandefa fehezam-boninkazo. Aorian'ny fandoavana ny vola dia mandeha any amin'ny florist ny baiko. Hampahafantarina anao ny fandefasana amin'ny alàlan'ny hafatra iray alefa any amin'ny nomeraon-telefaoninao sy mailaka voafaritrao, ary misy koa ireo fampahalalana ao amin'ny kaontinao manokana ao amin'ny.floristum.ru/en.
Izahay dia mandefa ny fampahalalana farany momba ny satan'ny kaomandinao amin'ny alàlan'ny hafatra SMS, mailaka, azonao atao koa ny manamarina ny satan'ny filaminana ao amin'ny kaontinao manokana amin'ny tranokalanay. Handray hafatra SMS sy mailaka ianao momba ny fahazoana ny fandoavam-bola ho an'ny baiko sy ny fifandraisan'ny mpivaro-boninkazo manangona ny fehezam-boninkazoo, azonao atao ny mifandray amin'ny mpivarotra voninkazo amin'ny fotoana rehetra, manazava ny toerana misy anao na manao fanitsiana ireo masontsivana manafatra voninkazo.
Azonao atao ny mandoa vola amin'ny tranokala amin'ny alàlan'ny karatra banky ho an'ny olona iray. Ho an'ny orinasa ara-dalàna, misy ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny famindrana banky.
Floristum.ru dia serivisy mety amin'ny fivarotana voninkazo sy mpivarotra voninkazo avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao mametraka ny vokatra vokariny. Eto ianao dia afaka misafidy sy manafatra fehezam-boninkazo avy amin'ny florist an'ny tanànanao, izay hanome fahafaham-po tanteraka ny fanirianao. Ankoatr'izay, ny mpanjifa tena izy dia mandefa famerenana amin'ny tranonkala, izay tena mety rehefa misafidy toerana hametrahana baiko amin'ny fandefasana voninkazo. Ny Floristum.ru dia miantoka anao amin'ny fampiharana ny baiko, amin'ny toe-javatra tsy ampoizina dia hamerina ny volanao ny serivisy, azo atao izany satria ny florists sy ny magazay dia mahazo vola amin'ny fandefasana voninkazo telo andro monja aorian'ny nahavitan'ny kaomandy, mandritra io vanim-potoana io dia afaka mametraka fitoriana ny mpanjifa ary mahazo vola miverina.
Hamarino tsara fa ny antsipiriany momba ny karatry ny bankinao dia nampidirina tsara, ny anarana sy ny anaram-bosotra dia tsipelina amin'ny teny anglisy mitovy amin'ny ao amin'ilay karatra. Kaody CVV dia tarehimarika 3 miorina ao ambadiky ny karatra. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny rafitra dia hanazava aminao ny antony tsy nahavitana tsara ny fandoavana. Raha holavin'ny banky ny fandoavam-bola dia alao antoka fa hifandray amin'ny serivisy fanampiana ianao amin'ny alàlan'ny isa tsy andoavam-bola ao amin'ny karatrao. Miezaha misafidy fomba fandoavam-bola hafa ho an'ny baikonao.
Eny, miantoka fiarovana ho an'ny mpanjifanay izahay. Ny fandoavam-bola dia atao amin'ny pejy azo antoka, ary ny angona karatra aorian'ny fandoavam-bola dia tsy voatahiry ao amin'ny rafitra. Miara-miasa amin'ny Nadezhda sy ny rafitra fandoavam-bola CloudPayments fanta-daza izahay.
Androany tsy azo atao izany. Ato ho ato, ny fandoavam-bola amin'ny fandefasana voninkazo amin'ny vola dia ho azon'ny mpanjifanay, avy eo aorian'ny famenoana ny fampahalalana ilaina amin'ny baiko, dia homena fomba fandoavam-bola maro izay safidinao ianao.
Raha misy ny fanafoanana ny kaomandy, ny vola aloa dia haverina manontolo amin'ny kaontinao ao anatin'ny 7 andro fiasana.
Ny fandoavana ny lamandy amin'ny karatra banky dia eo noho eo. Miara-miasa amin'ny rafitra CloudPayments izahay, izay fomba fandoavam-bola voaporofo. Aorian'ny fandoavana ny fandoavam-bola dia hahazo hafatra ianao fa nahomby ilay fandidiana. Azonao atao koa ny manamarina izany ao amin'ny kaontinao manokana.
Azonao atao ny mandoa ny kaontinao mivantana amin'ny tranokala amin'ny alàlan'ny karatra banky na amin'ny fahazoana vola. Afaka mampiasa ny serivisy fandoavambola tsy misy vola ny fikambanana ara-dalàna.
Eo akaikin'ny fehezam-boninkazo tsirairay dia ny fotoana holaniana amin'ny famolavolana sy fandefasana voninkazo. Ny tranonkala dia manana sivana mety "Fandefasana haingana", mampihatra azy, ho hitanao ireo safidy ho an'ny fehezam-boninkazo azo atolotra ao anatin'ny fotoana fohy.
Maimaimpoana ny fanaterana ao an-tanàna, ao an-drenivohitra sy St. Petersburg - ao anatin'ny làlambe. Raha any ivelan'ny tanàna ny adiresy fandefasana, dia refesina ho azy ny vidiny. Ny rafitra, mifototra amin'ny halaviran'ny kilometatra, dia hanome anao ny vidin'ny fandefasana. Matetika dia tombanana ho 45 roubles isaky ny 1 km.
Raha tsy azonao atao ny manondro ny adiresy fandefasana azy, ary ny mpandray dia ho eo ivelan'ny tanàna avy hatrany rehefa mandefa fehezam-boninkazo, dia hiantso anao tokoa ny mpiasa iray hamaha ity olana ity.
Ao amin'ny tranonkala dia azonao atao ny mamaritra ny vanim-potoana fandefasana ora. Mampalahelo fa tsy manome ora ara-potoana ny serivisinay. Saingy manandrana mitady fomba tokana ho an'ny mpanjifa tsirairay izahay, mba hahafahanao manondro ny fanirianao momba ny baiko, ary ny mpiasanay dia hiezaka ny hanao izay rehetra azo atao mba hampiharana azy ireo.
Mazava ho azy, avelao fotsiny ny nomeraon-telefaona azonay. Ny mpampita hafatra dia hiantso azy ary hanondro ny ora sy ny fotoana handefasana ny kaontinao.
Aorian'ny fametrahana baiko dia hahazo hafatra miaraka amina rohy miavaka ianao hijerena ny satan'ny kaomandinao. Amin'ny fipihana eo aminy, afaka mifandray amin'ireo mpivaro-boninkazo ianao, mahita ny sarin'ny fehezam-boninkazo vita ary manara-maso ny toerana misy ny baikonao eo amin'ny sari-tany. Amin'ny faran'ny fandefasana dia afaka manoratra famerenana ho an'ny florist izay niara-niasa taminao ianao. Faly izahay rehefa manome valin-kafatra ny mpanjifa, ka afaka mandefa hafatra momba ny hevitrao izahay miaraka amin'ny fahatsapana ankapobeny momba ny fanafarana voninkazo.
Eny, amin'ny alàlan'ny serivisinay dia afaka manome voninkazo tsy manerana ny firenena ianao, fa manerantany. Soraty fotsiny ny tanàna mahaliana anao amin'ny fikarohana dia haseho anao ny safidy rehetra azo alaina amin'ny fehezam-boninkazo.
Manakaiky ny fehezam-boninkazo tsirairay dia misy fotoana, izay ilaina amin'ny fisoratana anarana sy fandefasana ny fehezam-boninkazo ho an'ny mpandray anjara. Rehefa mametraka baiko dia alao antoka fa mifantoka amin'izany. Raha mila manatitra voninkazo maika ianao dia ampiasao ny sivana Fast Delivery. Raha mila fanaterana amin'ny daty manokana ianao dia safidio rehefa mametraka baiko. Raha apetrakao eo akaikin'ny teny hoe "Ampahatsiahivina" ao amin'ny kaontinao manokana ny marika iray, dia hampahatsiahy anao ny baikonao ny serivisy Floristum.ru. Ho tonga aminao ilay taratasy telo andro alohan'ny andro fandefasana.
Lazao fotsiny ny toerana fanaterana, safidio ny fehezam-boninkazo tianao ary apetraho ny baikoo. Ao amin'ny filaharana, asehoy ny antsipirian'ny fifandraisan'ny mpandefa sy ny mpandray, ary koa ny ora fanaterana. Aorian'ny fandoavana ny volavolan-dalàna mahomby, ny florist anay dia hitondra azy io hiasa. Hampandrenesina anao ny fandefasana hafatra.
Raha tsy tianao ireo voninkazo azonao tamin'ny antony rehetra, dia mandehana any amin'ny kaontinao manokana na araho ny rohy nalefa taminao tamina hafatra na mailaka. Any ianao dia afaka mamela hevitra momba ny baikonao. Raha ratsy ny famerenana dia azonao atao ny manokatra fifanolanana, dia hofongorana mandritra ny fotoana maharitra ny habetsaky ny vola ao amin'ny kaontin'ny florist. Araka ny politikan'ny serivisinay, ny mpanjifa dia afaka manaiky ny florist hanolo ny fehezam-boninkazo na hamerina ny vola feno. Zon'ny Florists koa ny manome anao fihenam-bidy amin'ireto baiko manaraka ireto. Ny fifanolanana dia azo sokafana ao anatin'ny telo andro aorian'ny fandefasana ilay fehezam-boninkazo. Raha efa nanoratra famerenana tsara momba ny baiko amin'ny fivarotana na mpivarotra voninkazo iray ianao dia tsy hisokatra ny fifanolanana.
Azonao atao ny manindry ny bokotra "Tsy afaka mamaky ny fivarotana aho". Amin'ity tranga ity, ny florist dia hahazo fampandrenesana fa nanandrana niantso ianao, ary hihena ho azy ny isa ny fivarotana. Ho setrin'izany, hifandray amin'ny fivarotana izahay, ary hiantso anao tokoa ny mpiasany.
Matetika ireo mpandray dia mifandray alohan'ny fandefasana tena izy. Ny irakiraka dia hanaiky amin'ny fotoana mety hanaterana voninkazo vaovao amin'ilay adiresy. Raha nametraka kaomandy tamina daty voafaritra ianao, dia hifandray amin'ny andro andefasana, matetika amin'ny maraina ny mpandray. Ao amin'ny kaontinao manokana, azonao atao ny mamantatra ny ora fandefasana ny baiko, dia hovaina ho fotoana mety ho an'ny mpandray.
Ho an'ny fehezam-boninkazo tsirairay, voafaritra ny fotoana farafaharatsiny fisoratana anarana sy fandefasana azy, dia aseho eo akaikin'ny fehezam-boninkazo tsirairay. Azonao atao ny mametraka baiko na mialoha na amin'ny andro fanaterana.
Ny serivisinay dia miara-miasa mavitrika amin'ny fikambanana ara-dalàna ary mitondra baiko ara-orinasa matetika, amin'izany dia ampian'ny rafitra mandeha ho azy isika. Ny voninkazo isan-karazany dia mamela anao hisafidy fehezam-boninkazo amin'ny fotoana rehetra. Rehefa mametraka baiko dia tsy maintsy asehonao ny antsipirian'ny fikambanana ara-dalàna. Halefa ho azy any amin'ny mailanao ny faktiora.
Rehefa mametraka ny kaonty voalohany amin'ny serivisinay ho toy ny antokon-dalàna ianao, dia halefa ho azy taratasy miaraka amin'ny fifanarahana sy faktiora. Tsy maintsy mameno, manasonia ary mandefa ilay fifanarahana voaray tamina kopia roa ho an'ny mail anay ianao. Dia halefanay aminao ny iray amin'izy ireo.
Raha liana ny hahita ny fifanarahana alohan'ny hametrahana baiko ianao dia mifandraisa aminay: @
Ny mpividy dia misoratra anarana amin'ny tranokala avy hatrany aorian'ny fametrahana ny baiko voalohany. Ny nomeraon-telefaona nofaritanao tamin'ny fampahalalana momba ny filaharana dia ho tonga fidirana any aoriana. Ny kaody amin'ny fampidirana ny kaontinao manokana dia halefa aminao amin'ny alàlan'ny hafatra.
Raha manafatra voninkazo isaky ny sombin-javatra ianao dia tsy maintsy mifidy farafahakeliny 7. Manoro hevitra anao izahay handeha amin'ny fizarana "Super Offer", hita ao amin'ny pejin'ny tranokala io. Ireto ny tolo-tanana avy amin'ny fivarotana ambongadiny sy antsinjarany misy mari-pamantarana lafo.
Eny, azonao atao. Raha te hanova zavatra amin'ny fehezam-boninkazo voafidy ianao dia avelao fotsiny ny fanirianao amin'ny fampahalalana fanampiny mandritra ny dingan'ny fandaminana. Ny florist anay dia hiantso anao hiresaka ny safidy azo soloina.
Akaiky ny sary miaraka amin'ny fehezam-boninkazo dia misy famakafakana feno ny fandrafetana azy. Azonao atao ihany koa ny manindry ny anaran'ny voninkazo, hasongadina ny lokony amin'ny sary.
Ny haben'ny fehezam-boninkazo dia aseho manaraka ny sary tsirairay. Izy ireo dia asehon'ny florist izay mpanoratra ny fandaminana voninkazo.
Ireto ny tolotra avy amin'ny fivarotana ambongadiny sy antsinjarany misy vidiny mirary ho an'ny fehezam-boninkazo. Ho fanampin'izay, afaka manapa-kevitra samirery ny isan'ny voninkazo, ny karazany, ny halavan'ny tahony ary ny loko ianao.
Raha te hahita fehezam-boninkazo misy ireo voninkazo ilainao dia jereo ny fanampian'ny sivana.
Eny Mazava ho azy. Ny Florists dia mandefa sary fehezam-boninkazo izay efa nangonin'izy ireo teo aloha, ka ho mora ho azy ireo ny mamerina ilay firafitra mitovy aminy.
Eny, amin'ny alàlan'ny fandehanana mankany amin'ny pejin'ny vokatra dia azonao atao ny mampitombo ny fehezam-boninkazo hatramin'ny 30% na 60%. Izany hoe, ny vidin'ny fehezam-boninkazo dia ho avo kokoa amin'ity ampahany amin'ny habetsaky ny tany am-boalohany ity, ary ny voninkazo tafiditra ao amin'ny fehezam-boninkazo dia ho ampiana amin'ny famoronana. Raha misafidy fehezam-boninkazo iray karazana ianao, dia azonao atao ny mampitombo isa azy ireo isaky ny isa.
Ny safidy rehetra amin'ny fehezam-boninkazo dia aseho eo amin'ilay tranonkala. Mamporisika anao hampiasa sivana mety amin'ny fikarohanao. Fa izahay miasa amin'ny florists izay miasa miaraka amin'ny voninkazo tapaka.
Lazao ny fanirianao sy ny fepetra momba ny fanatanterahana ny baiko amin'ny fampahalalana fanampiny. Raha misy izy ireo, dia hiantso anao hifanakalozan-kevitra ny florist.
Ny floristista miasa miaraka amin'ny serivisy Floristum.ru no mahalala ny fitsipinay: “Voninkazo vaovao ihany! Tsy mifanaraka? Floristum.ru tsy natao ho anao. " Noho izany, azonao antoka fa voninkazo vaovao ihany no tafiditra ao anatin'ilay firafitra. Amin'ny fandefasana ny fehezam-boninkazo, ny mpandray dia manombana ny fihavanan'ny voninkazo. Rehefa dinihina tokoa, ho an'ny florist tsirairay izay mahaliana anao dia afaka mahita hevitra amin'ny tranokalanay ianao.
Floristum.ru manome antoka
Eny, amin'ny pejy hafa no anaovana ny fandoavana, ary ny tahirin-kevitry ny mpanjifa dia tsy voatahiry. Miasa amin'ny rafitra malaza sy azo antoka ihany izahay.
Eny Mazava ho azy. Rehefa mametraka kaomandy ianao dia mametraka vola any amin'ny kaontin'ny serivisinay aloha, izay ametrahana azy ireo mandra-pahatapitry ny kaomandy ary mandritra ny telo andro hafa. Ny fepetra toy izany dia raisina mba hananan'ny mpanjifa fanontaniana momba ilay baiko. Mandritra io fotoana io dia manana fotoana hanokafana fifandirana ianao, avy eo ny vola dia tsy hampidirina amin'ny kaontin'ny florist raha tsy voavaha ny olana rehetra.
Raha ny asa dia efa noraisina ho an'ny asa, dia tsy maintsy miandry 1 hatramin'ny 14 andro fiasana ianao.
Raha mbola diso fanantenana amin'ny baikonao ianao dia aza hadino ny manoratra famerenana. Raha ratsy izy io dia azonao atao ny manokatra ady amin'ny florist. Amin'ny fotoana anazavana ny zava-misy rehetra dia hosakanana ny vola ao amin'ny kaontin'ny mpivarotra voninkazo. Afaka mifanaraka amin'ny florist ianao hanoloana ny fehezam-boninkazo na hamerina ny vola feno. Ny florists anay dia manome lanja ny mpanjifany, ka matetika dia omen'izy ireo fihenam-bidy amin'ny baiko manaraka. Ny fifandirana dia azo atomboka ao anatin'ny telo andro manomboka amin'ny andro nanaterana ny fehezam-boninkazo. Raha efa namela famerenana tsara momba ny baiko ianao dia tsy azo atao ny manokatra fifandirana.
Aorian'ny fanaterana ireo voninkazo dia halefa any amin'ny nomeraon-telefaonanao ny hafatra, ho valin'izay azonao soratana ny fiheveranao ny fiarahanao miasa amin'ny florist sy ny filaminana ihany. Ao amin'ny tranokala, amin'ny alàlan'ny fampidirana ny kaontinao manokana, azonao atao ny manoratra famerenana.
Ny fivarotana tsirairay dia misy famerenana be dia be, ao anatin'izany dia misy valiny tsara sy ratsy. Manakaiky ny tsirairay amin'izy ireo dia aseho hoe iza no nanoratra ny famerenana: ny mpanjifa na ny mpandray. Izay nanoratra azy teo aloha ihany no afaka manitsy ny famerenana.
Manome karatra paositra maimaim-poana ho an'ny fehezam-boninkazo tsirairay izahay. Ny mpanjifa ihany no tsy maintsy manoratra ny lahatsoratra fiarahabana. Ny florist dia hisafidy karatra mifanaraka amin'ny fehezam-boninkazo sy ny lahatsoratrao.
Rehefa mametraka baiko dia homena vokatra fanampiny maromaro ianao. Raha tsy hitanao eto ny zavatra ilainao, dia mifandraisa amin'ny mpiasa, azo antoka fa hanampy anao izy ireo.
Ny florist dia misafidy ny karatra fiarahabana miorina amin'ny lahatsoratra nosoratanao. Fa raha manana faniriana manokana ianao dia ampahafantaro azy ireo amin'ny fampahalalana fanampiny rehefa mametraka kaomandy.
Rehefa mametraka baiko dia apetaho eo alohan'ireo teny hoe "Makà sary miaraka amin'ny fehezam-boninkazo". Raha manaiky ny mpandray anjara, dia ho hitanao ao amin'ny kaontinao manokana na amin'ny mailaka.
Ny rindranasa finday "voninkazo Floristum.ru" dia tsy ho ela dia azo alaina ao amin'ny AppStore na PlayMarket.
Ny serivisinay dia mampiasa florist avy amin'ny tanàna samihafa. Rehefa mametraka baiko dia miasa miaraka aminy ny mpivaro-voninkazo, izay namoaka tolotra tao an-tanàna nofidinao. Samy manana florist ny tanàna tsirairay, ka miovaova koa ny karazany.
Betsaka ny mpivarotra voninkazo any amin'ny tanàn-dehibe, noho izany dia manintona ny mpanjifa tsy amin'ny ambaratonga maro ihany izy ireo, fa amin'ny vidiny ambany ihany koa.